Mhlawumbe sonke sakwazi ukungena kulonyaka lapho bedlala Sandbox kwaba yokuchitha isizungu esizithandayo. Ngakho-ke, lapho ziba ngabantu abadala, siba ngabantwana ngokwabo wabonakala, sifuna ukuze ugxilise kuzo uthando akukho ngaphansi kwakhe.
Ngeshwa, egcekeni Sandbox neze zezingane zethu: esihlabathini ezingcolile nge admixture we emhlabeni, ubumba kanye ezinye amagatsha ubudala njenge-imbucumbucu ixhaphozi, hhayi endaweni ukudlala. Ngaphezu kwalokho, zingabantu yangasese yomphakathi ngenxa amakati abangenamakhaya kanye nezinja. Ingabe sifuna ukuba niyiqede ingane yabo ethandekayo ukudlala kulokho okubizwa ngokuthi sandbox?
Ngakho kungani ungathathi nathi, abazali, Umklamo zokudlala ezandleni zabo? Ingabe thina matasa ngomsebenzi wawo, i-TV kanye ukuyothenga, ngisho izingane zabo Awukwazi ukudala zonke izimo nentuthuko yabo? Kungani design ebaleni lokudlala ngezandla zakhe kwenza abazali yesimanje badideke elingaphandle ngisho ongayikwesaba na?
Thina lapha asikhulumi ngama izindleko okukhulu. Ungakha wonke ngokurhaba kunesidingo. Cabanga indlela ingane yakho uyoziqhenya yokuthi uyise eye wazenza ngoba jika wakhe!
Ukwenza zokudlala ungaqala nge engadini: azungezwe we isitshalo nezihlahla ongaphakeme, okuzokwenza esikhundleni kocingo. Sandbox, imali eningi kakhulu ayidingeki - ngaphandle amabhodi ezimbalwa, isando, nezandla eyavela naleyo ndawo. Nokho, ukuze ekwakheleni izilwane abangenamakhaya yangasese entsha, kudingeka wazi ukuthi yini ligcwale. Ngicabanga, obukhulu Indwangu waterproof kulungile: kungaba abethelwe amapulangwe bese ikhava yangempela.
Mayelana nendlela abantwana abathanda kukhulunywa, awudingi ukukhuluma. Kodwa ingabe zonke egcekeni ingane anganika ngokwami injabulo enjalo? Kodwa lokhu, amakhono kakhulu liyadingeka. ipuleti Flat futhi intambo elenga zombili. Ukwenza zokudlala Kubalulekile: izinto angenalutho futhi sidle cishe ukugxilisa ezinganeni zethu uthando ngobuciko.
Amathayi engadingeki etholakala imibhede kakhulu, futhi banqunywa ngokusahwa yonkana iziphunzi -. "Tile" okuhlobisa Ngizothanda futhi ukwenza okuthile kumnandi, isibonelo, indoda-Borovichka ubudala ikhathuni ubudala Soviet. Nge isigqoko, mhlawumbe, kufanele ngisebenze kanzima ukuze, kodwa uzothatha indawo emzimbeni zaveza isiqu obudala izimpande.
Ukwenza zokudlala - ngakho kunqubo wukuthi izingane zethu ziyajabula bafuna iqhaza kuwo. Nabo futhi, kungaba beveza embhedeni ngesimo ingwenya noma indlulamitsi kusuka kungekho masondo amadala ezimoto nokusiza ukuhlobisa jika emibalabala Sandbox.
Izingane ikakhulukazi athande ukudlala nge izinto ezincane, njenge-amatshe. Futhi ukuthi umi eduze Sandbox ukwenza "echibini ezomile" bagcwala amatshana amancane?
Ithebula nezihlalo lingakhiwa ukuma a amakhowe, usebenzisa iziphunzi ubudala. Impela kancane umsebenzi nge umcabango wabo kanye nomklamo zokudlala kuyosilethela eziningi ukuzijabulisa kusukela inqubo umsebenzi wenzeke. Lezo ngokuhlanganyela ziyohlanganyela izingane zethu kuphela, kodwa futhi abazali, bese, mhlawumbe, ngeke ufuna ukumisa khona, ngoba zokudlala for enkulisa ayidingi ukunakekelwa kangako nezibi uma beqhathaniswa egcekeni. Futhi ngubani, uma kungekhona sizobe namanje ukusiza izingane zethu?
Umsebenzi kagesi: inhlangano jikelele nokuziphatha
Namadreni ngoba uphahla ezenziwe metal: ukwakhiwa. Namadreni ka lashukumisa ophahleni metal
Engineering ibhodi - isizukulwane esilandelayo amapulangwe aphansi